Soo-saarista Tuubbada Shiinaha ee Soo-saarista iyo Warshad | Zebung
ZEBUNG Rubber Dredging Hoses waa ujeeddo loo dhisay shuruudaha gaarka ah ee macaamiisheena. Waxaan joognaa boos aan ku dhisno cabbir tuubbo u dhexeeya 100 mm ID ilaa 2200 mm ID. Naqshadeeyayaashayadu waxay ka xulan doonaan waxyaabaha ugu habboon alaabooyin badan oo kala duwan oo aan heli karno si aan ula kulanno shuruudaha adeegga iyo dalabaadka ay codsadaan macaamiisheennu sida ku saabsan xirashada iska caabbinta, qiimeynta cadaadiska, xoogga silica, awoodda foorarsiga iyo xuduudaha kale.
Guud ahaan ZEBUNG Rubber Dredging Hoses waxay ka kooban tahay dahaadh gudaha ah oo lagu hagaajin karo si loo daboolo shuruudaha gaarka ah ee dhexdhexaadinta la raray. Xidho lakabyo tilmaame ayaa sidoo kale lagu fulin karaa dahaarka tuubbooyinka qaada qalabka dhexdhexaadka ah.
Tuubbooyinka gaashaaman ee gaashaaman waxaa loo isticmaalaa khadka qashin-qubka, oo ku habboon daabulidda walxaha fiiqan, waaweyn iyo kuwa culus sida baalal-dhagaxleyda, qulqulka iyo dhagaxa cimilada. Iyada oo la dhisayo-biraha iska caabin ah, lakabka gudaha wuxuu leeyahay qaab wanaagsan oo duug ah iyo iska caabin jilicsan.
Dhexroor gudaha ilaa 1300mm, dherer kala duwan iyo kala duwanaanta cadaadiska.
Qaybta dhumucda dhuumaha tuubbada: laga bilaabo 15mm illaa 100mm.
Maro-adkaysi u-xoqidda iyo foorarsiga-diidmada.
Waa ku habboon tahay in la rakibo, la rogrogmi karo oo la isticmaali karo oo ammaan ah.
Xagasha shaqada: 0 ° ilaa 45 °
heerkulka shaqada: -20 ° C ilaa 50 ° C
Ballaca Tuubada: 200mm-1100mm
Dhexroor Flange: 340mm-1550mm
Dhumucda Flange: 25mm-65mm
Dhumucda darbiga gudaha: 12mm-45mm (waa la habeyn karaa)
Hole on flange: 8-36
Dhexroor godka: 22-36mm
Waxaan ku dadaalnaa inaan noqono shirkadda ugu wanaagsan ee gudbisa biyaha iyo tamarta adduunka. Si aan alaabteenna uga dhigin oo keliya kuwa ka sarreeya heerarka warshadaha; laakiin sidoo kale ka sarreysa rajooyinka macaamiisheena dalbanaya.
cabir aqoonsi WP dherer
FIIRO GAAR AH: ID900mm & 1200mm, xuduudaha kale waa shuruudahaaga
Hore: Tuujinta Doob Dose
Xiga: Tuubada Hawada
Tuubada Nuugista Dheecaanka
Sibidhka Sibidhku tubbo biyo tuban
Xidho Tuubbada Neefta Diidmada Caagga ah